တရုတ်ပြည်တွင်းနှင့်ပြင်ပ လည်ပတ်မှု emulsifying စက်|အလှကုန်ထုတ်လုပ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများနှင့်ရောင်းချသူများ |ZhiTong
အတွင်းပိုင်းနှင့် ပြင်ပသွေးလှည့်ပတ်မှု emulsifying စက်|အလှကုန်ထုတ်လုပ်ရေးပစ္စည်း
7.Emulsifying စက်ဖွဲ့စည်းမှု- ရေအဆင့်အိုး၊ ဆီအဆင့်အိုး၊ emulsifying pot၊ ဖုန်စုပ်ပန့်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်စနစ်၊ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်၊ အလုပ်လုပ်ပလပ်ဖောင်း၊ လှေကားနှင့် အခြားအစိတ်အပိုင်းများ
8.emulsifying စက်တပ်ဆင်နိုင်သည်- သုတ်ခြင်းစနစ်၊ အားသွင်းစနစ်၊ အအေးနှင့်အပူပေးစနစ်၊ လေဟာနယ်စနစ်၊ နိုက်ထရိုဂျင်ကာကွယ်မှု၊ PH တန်ဖိုးအွန်လိုင်းတိုင်းတာမှုထိန်းချုပ်မှု၊ CIP သန့်ရှင်းရေးစနစ် စသည်ဖြင့် တပ်ဆင်နိုင်သည်။
9.Vacuum စနစ်၏emulsifying စက်ရောစပ်နေစဉ်အတွင်း လေပူဖောင်းများကို ဖယ်ထုတ်ရန်နှင့် ပါဝင်ပစ္စည်းများကို လွှဲပြောင်းပေးရန်။
3.Ideal ကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း အမြန်နှုန်း ထိန်းညှိကိရိယာသည် အမြန်နှုန်းကို ထင်သလို stepless speed regulation ဖြစ်စေနိုင်သည်။
၁၁။ Emulsifier စက်ရောစပ်ပြီး ပါဝင်ပစ္စည်းများကို လွှဲပြောင်းရန် လေပူဖောင်းများကို ဖယ်ထုတ်ရန် ဖုန်စုပ်စနစ်။
၁၂။ Emulsifier စက်စံပြကြိမ်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်း အမြန်နှုန်းထိန်းညှိကိရိယာသည် အမြန်နှုန်းကို မထင်သလို stepless speed regulation ဖြစ်စေနိုင်သည်။
၁၃။Vacuum Homogenizer Emulsifier Mixer သည် အိုးအဖုံးပေါ်တွင် သီးသန့်ပေါင်းစပ်ထားသော ဖန်သားပြင်ကိရိယာတစ်ခု တပ်ဆင်ထားပြီး၊
၁၄။ပင်မ emulsification စက်ရှိ လျှပ်စစ်အပူပေးခြင်းအတွက် နှစ်ထပ် အပူချိန်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် ထိန်းချုပ်ကိရိယာများ၊
၁၅။အဆက်အသွယ် အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးကို SS316L ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး မှန်ကို ပွတ်တိုက်သည်။Emulsifier စက်
၁၆။လေဟာနယ်၊ ဟိုက်ဒရောလစ်ပန့်နှင့် အလုပ်သမားများအတွက် ဘေးကင်းရေး အကာအကွယ် ကိရိယာများစွာ၊
၁၇။ဆက်သွယ်ထားသောအစိတ်အပိုင်း၏ပစ္စည်းသည် SUS316L သံမဏိဖြစ်ပြီး၊ စက်၏အတွင်းနှင့်အပြင်သည်မှန်ပေါ်လစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး GMP စံနှုန်းကိုရရှိထားသည်။
၁၈။ပိုက်လိုင်းများနှင့် ကန့်သတ်ချက်အားလုံးကို အလိုအလျောက် ထိန်းချုပ်ထားသည်။Siemens ၊ Schneider စသည်ဖြင့် နိုင်ငံခြားမှ တင်သွင်းသော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ။
၁၉။Emulsifying tank သည် tertiary agitating system ကိုလက်ခံပြီး emulsification ကာလအတွင်း၊ processing တစ်ခုလုံးသည် vacuum environment အောက်တွင်ရှိနေသောကြောင့် emulsification processing တွင်ဖန်တီးထားသော spume များကိုဖယ်ရှားပေးရုံသာမကဘဲ မလိုအပ်သောလေထုညစ်ညမ်းမှုကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။
၂၀။homogenizer သည် အဆင့်မြင့်ဆုံးနည်းပညာကိုလက်ခံထားပြီး၊ ၎င်းသည် စံပြ emulsifying effect ကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ မြင့်မားသော emulsification ၏အမြန်နှုန်းမှာ 0-3500r/min ဖြစ်ပြီး ရောစပ်မှုနည်းသောအမြန်နှုန်းမှာ 0-63r/min ဖြစ်သည်။
၂၁။လေဟာနယ် emulsifying mixer တွင် အဓိကအားဖြင့် ရေအိုး၊ ဆီအိုး၊ emulsifying pot၊ ဖုန်စုပ်စနစ်၊ lifting system(ချန်လှပ်ထားနိုင်သည်)၊ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် (PLC သည် ရွေးချယ်နိုင်သည်) ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။operation platform စတာတွေကို စိတ်ကြိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ စွမ်းရည်။
၂၂။Polytetrafluroethylene ခြစ်ခြင်းဘုတ်သည် ရောစပ်ထားသော groove ၏ကိုယ်ထည်နှင့် ဘွိုင်လာပေါ်တွင် viscosity material ကိုခြစ်ထုတ်သည်။
၂၃။ယုံကြည်စိတ်ချရသောတင်းကျပ်မှုသေချာစေရန် တင်သွင်းလာသော စက်ပြင်တံဆိပ်ကို တံဆိပ်တုံး၏သက်တမ်းကို တာရှည်ခံစေပြီး အပိုပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်ကို သက်သာစေပါသည်။
၂၄။ Emulsifier စက်ရှိသည်။ အပူနှင့်အအေးအတွက်နှစ်ထပ်အကျီများ;တုန်လှုပ်ခြင်းစနစ်တွင် ပြတင်းပေါက်နှင့် အလင်းရောင်ပါရှိသည်။
၁၉။ရောစပ်မော်တာများသည် Siemens သို့မဟုတ် ABB အမှတ်တံဆိပ်များကို လက်ခံကျင့်သုံးပြီး စက်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ဆူညံသံနည်းပါးကြောင်း သေချာစေပါသည်။
၂၅။ငmulsifier ရောမွှေစက်Vacuum Homogenization Mixer ၏ သတ်မှတ်ချက်များသည် GMP စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာခြင်း၊
၂၆။1440rpm သည် ကုန်ကြမ်းအရည်ပျော်စေရန် အပူပေးစနစ်ဖြင့် ဆီတိုင်ကီနှင့် ရေတိုင်ကီအတွင်း လူစုခွဲပေးသည်။
၂၇။Mightiness balance isotactic curve rotor ကို stator နှင့် လိုက်ဖက်ပြီး အရည်မြင့်-capability cut, rubbing;
၂၈။ ဖုန်စုပ်စက် အလှကုန် ခရင်မ်ပြုလုပ်သည့်စက်စမတ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ် နှင့် အလွန်အမင်း အလိုအလျောက် ရိုးရှင်းသော အသုံးပြုသူ အင်တာဖေ့စ်ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
၂၉။သန့်ရှင်းရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရ လွယ်ကူစေရန်နှင့် သိုလှောင်ကန်အတွင်းပိုင်းကို စစ်ဆေးရန် လွယ်ကူစေရန် ဆီဟိုက်ဒရောလစ် ရုတ်သိမ်းစနစ်၊
၃၀။ အလှကုန် Emulsifierအလိုအလျောက်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ဖောက်သည်၏ CIP စနစ်သို့ ချိတ်ဆက်ရန် Spray ball တပ်ဆင်ထားပါသည်။
မော်ဒယ် စွမ်းရည် (L) ပင်မအိုးပါဝါ (kw) ဆီအိုးပါဝါ (kw) ဟိုက်ဒရောလစ် ဓာတ်လှေကားပါဝါ (kw) စုစုပေါင်း ဓာတ်အား (kw)
ပင်မကန် ရေတိုင်ကီ ဆီတိုင်ကီ ရောစပ်မော်တာ Homogenizer မော်တာ RPM ရောစပ်ခြင်း။ homogenizer RPM ရေနွေးငွေ့ အပူပေးခြင်း လျှပ်စစ်အပူ
ZT-KB-50 50 40 25 ၁.၁ ၂.၂ ၀-၆၃ 0-3000 ၀.၇၅ ၀.၇၅918
ZT-KB-150 ၁၅၀ ၁၂၀ 75 ၁.၅ ၄--၉ ၁.၅ ၁.၅ 13 30
ZT-KB-200L ၂၀၀ ၁၇၀ ၁၀၀ ၂.၂ 4.0--11 ၁.၅ ၁.၅ 15 40
ZT-KB-300 ၃၀၀ ၂၄၀ ၁၅၀ ၂.၅ 4.0--11 ၁.၇ ၁.၇ 18 49
ZT-KB-500 ၅၀၀ ၄၀၀ ၂၀၀4၅.၀--၁၁ ၂.၂ ၂.၂ 24 63
ZT-KB-1000 ၁၀၀၀ ၈၀၀ ၄၀၀ ၅.၅ ၇.၅--၁၁ ၂.၂ ၂.၂ 30 90
1. ကောင်းမွန်သောဓာတုပစ္စည်းများ- ပလတ်စတစ်များ၊ ဖြည့်စွက်စာများ၊ ကော်များ၊ အစေးများ၊ ဆီလီကွန်ဆီ၊ အလုံပိတ်များ၊ slurry၊ surfactants၊ ကာဗွန်အနက်ရောင်၊ ကော်လွိုက်ကြိတ်စက်၊ emulsifying စက်၊ filter defoaming agent၊ brightener၊ သားရေ additives၊ coagulants စသည်တို့။
2. နေ့စဉ်ဓာတုလုပ်ငန်း- အဝတ်လျှော်မှုန့်၊ စုစည်းထားသော အဝတ်လျှော်မှုန့်၊ အရည် ဆပ်ပြာ၊ အလှကုန် အမျိုးမျိုး၊ အသားအရေ ထိန်းသိမ်းမှု။
2.ပမာဏ : 50L မှ 500L အထိ
ယခင်- ဟိုက်ဒရောလစ်ထုတ်ခြင်းအမျိုးအစား ဖုန်စုပ်စက် emulsifier|ဖုန်စုပ်စက် Homogenizer|ဖုန်စုပ်စက်
နောက်တစ်ခု: အလှကုန်ပြုလုပ်ခြင်းအတွက် သော့အောက်ခြေ ရောနှော emulsifier|အလှကုန်ပြုလုပ်ခြင်း စက်ပစ္စည်း
အလှကုန်ပြုလုပ်ရန်အတွက် သော့အောက်ခြေဖျော်စက် emulsifier...